Usilika Fibroin ulwelwesi - China Simatech
I usilika imikhiqizo fibroin ulwelwesi nge ukujiya kanye izakhiwo mechanical tailorable ngokuvumelana nezimfuneko amakhasimende '.
B irandi igama: Fancci
Alternative igama: None
I usilika imikhiqizo fibroin ulwelwesi nge ukujiya kanye izakhiwo mechanical tailorable ngokuvumelana nezimfuneko amakhasimende '. Ulwelwesi ingalungiswa noma ngaphandle ikhule ezimbotsheni, nosayizi Pore ziyahlukahluka kusuka nanometer ukuba micrometer, ngaleyo ndlela kufanelekile cell isiko kanye izidakamizwa ukukhululwa izifundo.
P arameter kanye izakhiwo
Film ukujiya: 10-300 micrometer;
Ukucindezeleka: 0.1-1 MPA;
Lo mkhiqizo umkhiqizo ngokwezifiso. Singanikela uchungechunge imikhiqizo kasilika fibroin ulwelwesi futhi ngaphandle ikhule ezimbotsheni ngokuvumelana izicelo zakho.
Previous: Encibilikayo Lyophilized Usilika Fibroin
Okulandelayo: Usilika Fibroin Isixazululo
Ezivuselela Usilika Fibroin ulwelwesi
Ezivuselela Usilika Fibroin Amaphrotheni ulwelwesi
Ezivuselela Usilika Amaphrotheni ulwelwesi
usilika Fibroin Amaphrotheni ulwelwesi
Usilika Amaphrotheni ulwelwesi